Football Khabar » माछापुच्छ्रे र अन्नपूर्ण हिमालको काखमा विश्वकपको ट्रफी ! (फोटो फिचर)
माछापुच्छ्रे र अन्नपूर्ण हिमालको काखमा विश्वकपको ट्रफी ! (फोटो फिचर)
पोखरा, कात्तिक १०
आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिताको ट्रफी आज पर्यटकीय गन्तव्य पोखरामा सार्वजनिक गरिएको छ । अघिल्लो दिन शुक्रबार साँझ काठमाडौं ल्याइएको ट्रफीलाई सोही दिन साँझ स्वयम्भूमा सार्वजनिक गरिएको थियो ।
त्यसपछि आज पोखरा ल्याएर माछापुछ«े र अन्नपूर्ण हिमालको काख पोखरामा ट्रफी प्रदर्शन गरिएको हो । ट्रफी नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान पारश खड्का, उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, बलार सन्दीप लामिछानेलगायत खेलाडीको उपस्थितिमा गरिएको थियो ।
सन् २११९ मा इंल्यान्ड र वेल्समा आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना गरिँदैछ । सोही प्रतियोगिताको प्रचार तथा तयारीस्वरूप ट्रफीलाई नेपाल ल्याइएको हो ।
आइसिसीले प्रतियोगिता सुरु हुनुअघि विश्वव्यापी रूपमा क्रिकेटको प्रचार गर्न तथा लोकप्रियता बढाउन ५ वटै महादेशमा ‘ट्रफी टुर’ गरिरहेको छ । आइसिसीले ट्रफी नेपाल ल्याउनुभन्दा अघि ओमन, अमेरिका, वेस्ट इन्डिज, पाकिस्तान र बंगलादेशमा भ्रमण गराइसकेको छ ।
प्रकाशित मिति १० कार्तिक २०७५, शनिबार ०७:४७